Warshadda Khadka Wax Soo Saarka Gudiga Gypsum - Soosaarayaasha Khadadka Waxsoosaarka Gudiga Jiifka Gypsum, Alaab-qeybiyeyaal
Khadadka Sameynta Gypsum Stucco
Khadadka Sameynta Guddiga Gypsum
Mashiinka Xannibaadda Gypsum
Faa'iidada weyn ayaa ah nidaamka qalajiyaha kontoroolka xakamaynta tooska ah ee PLC, oo ah qaybta ugu muhiimsan ee qadka wax soo saarka guddiga gypsum iyo waliba xiriiriye muhiim ah si loo hubiyo tayada looxyada dhammaaday.
Khadka Wax Soo Saarka Gypsum Plasterboard
Kadib qaabeynta, looxyada waxaa lagu jarjarayaa dhererka loo baahan yahay by mindi gacanta PLC gacanta si toos ah. Mindigani wuxuu si fudud u goyn karaa inuu ahaado dherer kala duwan oo horey loogu sii dejiyey nidaamka PLC. Goynta ka dib, alwaaxda qoyan ee loo yaqaan 'gypsum' ayaa la ogaadaa oo si dhakhso leh loogu gudbiyaa alaab-qaadaha xawaaraha 1 # aagga gudbiyaha suunka iskutallaabta ah, looxyada qashinka ayaa ka baxaya khadka socda by
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee soosaaraya looxyada noocan oo kale ah waa inta badan budada gypsum (budada calcined gypsum) in waxyaabaha ku jira CaSO4 · 1 / 2H2O ay ka badan yihiin 75%. Budada 'gypsum budada', biyaha iyo waxyaalaha lagu daro ee kala duwan ayaa si otomaatig ah oo gooni gooni ah loo cabiraa loona geeyaa qasanka nidaamka iswada gaarsiinta joogtada ah.
Khadka Gudiga Gypsum
Ka dib markaad ka baxdo qallajiye, adigoo maraya nidaamka # 2 gudbinta iskutallaabta, guddiyada aan u qalmin (qiyaastii 3-5%) ayaa loo diri doonaa wareejinta wareejinta 3aad ee iskutallaabta si loo xareeyo loona isticmaalo dunnages ama adeegsi kale; halka guddiyada aqoonta leh ay u yimaadaan nidaamka miinshaarka otomaatiga ah.
Khadka Wax Soo Saarka Gudiga Saqafka Gypsum
Budada loo yaqaan 'Calcined gypsum budada', biyaha iyo waxyaabaha lagu daro ee kala duwan ayaa si otomaatig ah oo gooni gooni ah loo cabiraa loona geeyaa qasanka. Ka dib markii si fiican loogu qasay slurry oo ku faafay warqadda difaaca ee gypsum oo si joogto ah horay ugu socda. Markaad maraysid mashiinka qaabeynta, slurry-ka waxaa si buuxda ugu duuban warqad sare iyo hoose, oo lagu cadaadiyey guddiga gypsum-ka si wanaagsan loo nidaamiyay oo horay loo soo qaado sida xawaaraha xasiloon ee adag loo xakameeyo.
Khadka Tooska ah ee Wax Soo Saarka Guddiga Gypsum
Nidaamka bixitaanka qallajiye ee qadka 'gypsum board' wuxuu ka kooban yahay rollers tayo sare leh, nidaamka mesh difaaca, fariimaha la dhaqaajin karo, iyo matoorrada nooca ugu horeeya, iyo nidaamka PLC oo dhameystiran, iwm.